Avereno jerena ny Wavefun X-Pods, headphone toa an'i Apple Airpods! | Androidsis
Raha tianao Headphone karazana Apple Airpods Saingy tsy azonao atao ny mandany ny 200 Euros vidin'ny headphone paoma, tsara vintana ianao anio satria angamba mitondra ny vokatra tsara indrindra aminao aho mifandraika amin'ny kalitao / vidiny / antoka izay mitovy tanteraka amin'ireo Airpods of Manzana ireo. Ny headphones dia tsy iza fa ny Wavefun X-Pods ary azo alaina amin'ny Amazon Prime miaraka amin'ny fandefasana maimaim-poana ao anatin'ny iray andro monja amin'ny 54,99 Euros.
Eo ambonin'ity lahatsoratra ity dia avelako ho anao ny zavatra feno Famerenana horonantsary Wavefun X-Pods, izay ho ahy dia iray amin'ireo safidy tsara indrindra azo atao izao raha ny tianao dia ny mankafy sofina an-sofina tsy misy tariby farafahakeliny izay manelingelina ny zavatra niainan'ny mpampiasa anao, noho izany dia mamporisika anao aho mba tsy halainao izany satria ankoatr'izay omena anao ny fahatsapana momba ireo Wavefun X-Pods, asehoko anao koa ny dingana tokony harahinao mba hampifanarahana ireo headphones anao amin'ny finday Android-nao.
1 Wavefun X-Pods famolavolana sy famaranana
2 Kalitaon'ny feo sy fifandraisana Bluetooth 4.1
3 Fampiasana, fika manokana sy fampiasa teknikan'ny Wavefun X-pods
4 Ahoana ny fampifanarahana ny Wavefun X-Pods
4.1 Fomba tokana sy maody Stereo
4.2 Fomba mandroso (kalitaon'ny feo avo indrindra)
5 Ny hevitro manokana sy ny rohy mividy ao amin'ny Amazon
Wavefun X-Pods famolavolana sy famaranana
Mikasika ny famolavolana sy ny fahavitan'ireo Wavefun X-Pods, izay ho ahy dia ny safidy fividianana safidy tsara indrindra amin'ny Apple Airpods, Tsy maintsy milaza aminao aho fa manomboka amin'ny fampisehoana ny boaty izay ahatonga ny fonosana, hatramin'ny famolavolana sy ny fitaovana fananganana azy roa ilay boaty izay hampiasaina hitahiry sy hitondra ireo X-Pods dia voaloa hatrany, ary koa ny famaranana ny headphones azy, dia miharihary amin'ny fahitana azy voalohany ary alohan'ny hikasihan'ilay vokatra dia vokatra misy io Famaranana avo lenta izay tsy misy ilana fitsiriritana ny headphone tsy misy tariby an'ny Apple.
Araka izany, ilay boaty kanto sy ahazoana aina izay itahirizana ireo X-Pods, a boaty misy famaranana plastika avo lenta ary izay kosa dia karazana Power Bank izay hamela anay handoa ny headphones mihoatra ny vola feno roa, Mety tsara ny mitondra azy am-pitoniana ao am-paosin'ilay pataloha nefa tsy voamarikao hoe mitondra azy isika.
Mikasika ny fahavitan'ny X-Pods ihany dia manana isika haloes azo ovaina izay vita amin'ny karazana plastika rubbery miaraka amina fikitihana malefaka sy antiallergika tena malefaka, manamboatra ny tapany aoriana amin'ny terminal Motorola, izay mampifanaraka tsara amin'ny sofintsika ka manakana azy tsy hirongatra tsy an-kijanona toy ny mitranga amin'ny headphones hafa amin'ilay fomba.
Ny endriny dia kanto amin'ny misy azy ireo ary na dia vita tanteraka aza ny vokatra amin'ny karazana plastika telo, Ireo plastika ireo dia voamarika fa manana kalitao avo sy fanoherana ankoatra ny fanomezana lanja farany ambany amin'ny vokatra Izany amin'ny tranga maha-«headphone» an-tsofina azy dia ny tena marina dia ankasitrahana tokoa.
Kalitaon'ny feo sy fifandraisana Bluetooth 4.1
Tahaka ny ataoko foana satria tiako ny mampiasa fiteny azon'ny rehetra takarina sy takany, amin'ity fizarana feo ity dia tsy hanakorontana anao amin'ny famaritana ara-teknika izay saika tsy misy olona mahatakatra aho raha tsy tena sybarite of sound, na izaho ny tenako dia mahatakatra ny haavon'ny decibel, ny impedance na ny jargon hafa izay matetika ampiasaina amin'ireto tranga ireto. Azoko lazaina aminao tsotra izao fa amin'ny resaka herin'ny kalitao sy ny kalitaon'ny feo dia headphone izy ireo izay tena tsara tokoa.
Manana izany isika haavon'ny herinaratra mihoatra ny ampy, hany ka nanoro hevitra anao aho mba hijery ny haavon'ny haino aman-jery multimedia amin'ny findainao alohan'ny hametrahana ny headphone amin'ny sofinao mba tsy hatahotra satria mafy be ny feony.
Mikasika ny kalitaon'ny mozika, feo amin'ny ankapobeny ary ny kalitaon'ny antso amin'ny alàlan'ny fiasa tsy misy tanana ananan'ireto Wavefun X-Pods, Mila milaza aminao aho fa ny zava-drehetra dia mihoatra ny marina.
Ny kalitaon'ny feo dia mihoatra ny fandanjana ho an'ny karazana mozika, izay karazana mozika rehetra dia toa mahavariana Raha mbola manana fisie mozika alaina amin'ny finday avo lenta amin'ny kalitao tsara ianao dia mazava fa tsy mitovy ny mihaino hira amin'ny endrika mp3 alaina amin'ny kalitaon'ny 128 kbps noho ny iray alaina amin'ny kalitao 20 kbps na alaina amin'ny endrika flac.
Raha izany dia ampidirintsika ny effets immersion tanteraka noho ny vokan'ny banga Inona no mahatonga antsika hanao an'ity karazana sofina an-tsofina ity, tsy isalasalana fa mahita traikefa amin'ny kalitao avo lenta isika izay hampahafantatra antsika ny lohahevitra henointsika sy hihainoana ireo nuances ny hiranay izay mbola tsy henontsika hatramin'izao.
Rehefa miresaka kalitao amin'ny fampiasana ireo Wavefun X-Pods ireo, ny kalitaon'ny rakipeon'ny antso ary koa ny kalitaon'ny audio izay raisin'ilay mpifanerasera amintsika dia ny fahamarinana mihoatra ny mendrika sy ampy hanana resadresaka tsy misy olana, na mampiasa earphone havanana na ankavia na amin'ny fomba Stereo na fomba fifandraisana mandroso amin'ny finday avo lenta.
Mikasika ny fifandraisana, dia mihoatra ny fanompoana azy io Fifandraisana Bluetooth type 4.1 manolotra anay a tonga lafatra, milamina ary tsy voapaika ny fotoana sy ny fampifanarahana misy karazana Android, iOS terminal, solosaina manokana, sns, sns.
Fampiasana, fika manokana sy fampiasa teknikan'ny Wavefun X-pods
Raha ny mikasika ny azo ampiasaina dia ny marina Ireny Wavefun X-Pods ireny dia mahafaly ny aina azon'izy ireo anaovanaTena mahazo aina izy ireo ka manadino anao akory ny anaovanao azy.
Raha manampy an'io isika fa manana headphones roa izay azontsika ampiasaina amin'ny fomba roa, mendrika izany ny redundance, amin'ny maody Stereo na maody mandroso, ary koa Nomena ihany koa ny fahafaha-mampiasa azy ireo tsirairay hizara amin'ny mpiara-miasa na namana na zanaka dia tsy isalasalana fa vokatra be dia be isika.
Mikasika ny batterie integrated an'ny Wavefun X-Pods dia manana isika 45 mAh bateria lithium-ion azo havaozina ao amin'ny earbuds tsirairay, Manome fahaleovan-tena isika hihainoana mozika tsy an-kijanona saika 8 miaraka amina fiampangana tokana, raha ampiantsika an'io fa noho io boaty io dia mitondra bateria miaraka amintsika foana isika mba hamahana azy ireo raha vantany vao hakantsika ny headphones ary apetrantsika ao izany, boaty iray manana fahaiza-mibaiko 220 mAh, tsy maintsy milaza isika fa talohan'ny headset izay manolotra antsika a fizakan-tena mandritra ny 24 na mihoatra ny XNUMX ora, raha miala ao an-trano isika miaraka amin'ny écouteur efa feno ary voadidy tanteraka ny banky herinaratra.
Na dia tsy vitako manokana aza ny nifehy ny ora fiasan'ny boaty X-Pods, mba hamenoana ireo 220 mAh dia mila mihoatra ny adiny iray isika, raha toa ka mameno feno ny headphones amin'ny boaty, 30 minitra fotsiny no ilaintsika hahazoana izany.
Ahoana ny fampifanarahana ny Wavefun X-Pods
Fomba tokana sy maody Stereo
Raha ny momba ny pairing na ny fampifangaroana ny headphones tsirairay amin'ny maody tsirairay, dia mora toy ny mamela ny Bluetooth an'ny terminal anao, mampiharihary azy io ary manome azy io hikaroka fitaovana vaovao raha mitazona ny bokotra iray amin'ireo headphones isika, ilay irinay hampifanarahana amin'ny fomba tsirairay mandritra ny dimy segondra mandra-pandrenesanao ny teny hoe "Pairing"Amin'izay fotoana izay dia mamoaka ny bokotra herinaratra izahay, mitady X-Pods R na L eo amin'ny efijery an'ny Android amin'ny fikarohana fitaovana Bluetooth vaovao ary kitika eo amin'ny headset manokana.
Amin'ny maody Stereo dia mitovy tanteraka izy io satria tsy maintsy mikaroka sy mampifanaraka tsirairay ny sofina tsirairay avy isika, avy eo, raha vao atambatra tsy miankina ny sofina tsirairay, hampiasa azy ireo amin'ity maody Stereo ity dia tsy maintsy apetaho ny sofina havanana ary ampodio mandra-mahenoanao ilay teny hoe "Mifandray" ary avy eo dia manaova toy izany amin'ny sofina hafa..
Fomba mandroso (kalitaon'ny feo avo indrindra)
Mba hampifangaroana amin'ny maody mandroso dia ampifanarahintsika voalohany na ampiarahanay ny earphone havanana araka ny nohazavaiko teo ambonin'ireto andalana ireto. Raha vantany vao tafaraka ny earphone havanana dia vonoinay tanteraka izy io ary apetratsika ao an-tsofina ny sofina roa. Raha vao apetraka ao amin'ny sofinao marina ny sofina tsirairay, dia tsy maintsy manao izany isika tsindrio ary tazomy amin'ny fotoana iray ny bokotra herinaratra roa mandritra ny folo segondra mandra-pandrenesana ny teny "Connected" amin'ny sofina roa.
Azo atao izany raha tsy ampiarahina aloha ny sofina ankavia.
Ny hevitro manokana sy ny rohy mividy ao amin'ny Amazon
Modely maoderina sy mahatalanjona
Tsy manana fifehezana volavola anatiny izy ireo
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » Avereno jerena ny Wavefun X-Pods, headphones Apple Airpods kalitao fotsiny ho an'ny 55 Euros ary misy amin'ny Amazon Prime
Izy ireo ihany no Qcy Q29 amidy any Amazon amin'ny 42 ary herinandro lasa izay amidy 33, izay naverin'izy ireo imbetsaka. Ary tsy milaza aminao amin'ny Gearbest intsony aho fa mividy azy ireo ho an'ny zanako lahy amin'ny 28 euro.
jona joseph dia hoy izy:
Nanana traikefa ratsy tamin'ny Gearbest aho
Valiny tamin'i Juan Jose
Jacky dia hoy izy:
Ny vidiny dia tsy midika hoe zava-drehetra, satria ny tranonkala nambaranao momba ny gearbest, dia nanana traikefa ratsy be tamin'ny fiantsenana niaraka tamin'izy ireo aho. KOA
Valiny tamin'i Jacky
Juan Jose Nieto Salicio dia hoy izy:
Nividy Wavefun X-Buds aho taorian'ny nahitako ny famerenana androidsis, faly aho amin'izany. Ity dia marika tsara.
Valiny tamin'i Juan Jose Nieto Salicio
Dingana 10 raha nangalarina ny findainao